Teny amin'ny fokontany Aranta, vakim-paritra faharoa, no nifanandrina tamin'ny Polisy ny ampahany tamin'ireo jiolahy ka lavon'ny balan'ny polisy ny roalahy. Tany Mahavoky sy Fiofio kosa no nahatratrarana ny sasany, izay vehivavy mpampiantrano ny iray amin'izy ireo.
Sarona niaraka tamin'izy ireo ny basy sy bala nampiasaina nandritra ny fanafihana ary ireo akanjo fitondra amin'izany. Ilay iray manao akanjo maitso, mitokana amin'ny sary no tena lehiben'izy ireo sy mpamatsy fitaovam-piadiana, ary efa nigadra im-betsaka.
Mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana hatreto saingy efa misy ny loharanom-baovao fa misy mpiasa ao amin'ity banky voatafika ity tena anisan'ny niray tendro nikotrika ny fanafihana.